हुन्डाईको ‘विन्टर डिलाइट स्क्रिम’ - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
हुन्डाईको ‘विन्टर डिलाइट स्क्रिम’
काठमाडौँ, नेपालका लागि हुन्डाई गाडीको आधिकारिक विक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिले ‘हुन्डाई विन्टर डिलाइट स्क्रिम’ ल्याएको छ । यस योजनामार्फत ग्राहकहरुले हरेक हुन्डाई गाडीको खरिदमा आकर्षक नगद छुटको साथमा ६ लाख ९६ हजारसम्मको सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने अवसर पाउनेछन् ।
यसयोजना अन्तर्गत हरेक हुन्डाई गाडीको खरिदमा आकर्षक नगद छुट, निःशुल्क १ वर्ष सम्मको बिमा, रु. एक लाखसम्मको एक्सचेन्ज बोनस, रु. बीस हजार बराबरको लोयल्टी बोनससँगै पुरानो सवारीको स्पट् एक्सचेन्ज तथा मुल्यांकनको सुबिधा समेत प्राप्त गर्न सकिनेछ । साथै हरेक हुन्डाई गाडीको खरिदमा ४ वर्षसम्म निशुल्क सर्भिस र ३ वर्षको वारेन्टी पनि प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
चिसो मौसममा पनि ‘हुन्डाई विन्टर डिलाइट स्क्रिमले ग्राहक वर्गमा न्यानोपनको आभाष प्रदान गर्ने लक्ष्य लिइएको कम्पनीले जनाएको छ ।